Zambia ready to support Zimbabwe - Bulawayo24 News
"As you know Zimbabwe and Zambia are like Siamese twins, we have also signed an MoU with ZMF that will see us exchanging notes as organisations and support operations of our small-scale miners," said Mr Lungu.
"I want to assure you that we stand ready to share experiences with you. We have been in the business for more than 10 years now. We have prepared documents and data that we will like to share with our Zimbabwean friends " said Mr Lungu.
"Our people work hard and toil to get the minerals from underground only to be fleeced on pricing. We want to come up with a uniform pricing model that appeals to both Zimbabwe and Zambia with a view of spreading to the region in the long run," he said.
"I would also use my influence to try and address the issue of taxation, which has become a big thorn in the flesh. Working with our Zimbabwean counterparts I hope this can be achieved," he said.
"Zimbabweans are very strong people who despite the sanctions, continue working hard. As Zambia we are in total support of the lifting of the sanctions that are affecting the day to day living of people," said Mr Lungu.
ZMF president, Ms Henrietta Rushwaya, said the MoU seeks to create mutual benefit for both countries.
"The agreement is going to benefit both countries. Zambia is more experienced than us and we seek to benefit both in technical expertise as well as financial benefits from Zambia.
"We have been working together with our Zambian friends and we look forward to our relationship to grow so that we learn from each other and help each other counter challenges we face as small-scale miners," she said.
More on: #Zambia, #Zimbabwe, #Mining
3 hrs ago | 3696 Views
12 hrs ago | 5827 Views